Tuesday July 07, 2020 - 18:25:14 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Khilaafka ka dhashay biya xireenka ay dowladda Xabashida Itoobiya ka dhisayso halka uu kasoo burqado wabiga Niil ayaa wali taagan waxaana jira walaac laga qabo in khilaafkaas uu gacan ka hadal isku bedelo.
R/wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa markale ku celiyay in aysan wax gorgortan ah ka geli doonin biya buuxinta Kanaalka taas bedelkeedna ay sii wadayaan buuxinta waaskooyinka Al Nahda.
Abiy Axmed oo khudbad ka horjeedinayay golaha baarlamaankiisa oo fadhi degdeg ah ku yeeshay Addis Ababa ayaa dhaleeceeyay baaqyada soo baxaya ee ah in wadahadallada ka hor lagu heshiiyo in aan la buuxin karin biya xireenka.
Itoobiya waxay qirtay in Ururka Midowga Afrika uu soo gaarsiiyay soo jeedin ah in heshiis buuxo laga gaaro murunka udhaxeeya dowladaha sedaxda ah balse ay beentahay in ay ogolaadeen joojinta biya buuxinta biya xireenka.
Wasaaradda Waraabka Masar ayaa war ay shalay soo saartay ku sheegtay in Itoobiya ay ka madax adeygayso joojinta biya buuxinta Kanaalka Al Nahada oo ah midka ugu weyn qaaradda Afrika.